SDWO Relief Projects ayaa qaar ka mida agoonta xaafada daami ee Hargeysa u soo iibiyey dharka ciida sadaqooyinkii na soo gaadhay dabayaqadii Ramadan ee baaqii ciidsii caruurta danyarta ah | SDWO.COM & SomalilandNews.net
SDWO Relief Projects ayaa qaar ka mida agoonta xaafada daami ee Hargeysa u soo iibiyey dharka ciida sadaqooyinkii na soo gaadhay dabayaqadii Ramadan ee baaqii ciidsii caruurta danyarta ah
Published on June 15, 2018 by sdwo · No Comments
Sanadkaste waxaan bishs Ramadaan soo bandhiganaa laba mashuur oo aad u qiimo badan oo kala ah Afuri dadka danyarta ah iyo ciidsii caruurta danyarya iyo agoomaha ah. mashruuca afuri waxa na soo gaadhay 745 doolar oo 500 aan raashin bisha ku filan ugu iibinay 10 qoys oo degan xaafada daami. Halka 245 doolarna aanu gudoonsiinay reer danyar ah oo aabahii u shaqaynayeyna uu baabuur labadii gacmood jaray.
Mashruucaa ciidsii caruurtana waxa na oo gaadhay 1030 dollar oo aanu 800 ku ciidsiinay 27 ka mida caruurta danyarta iyo agoomaha xaafada daami. halka 130 dollarna gudoonsiinay reerkii uu aabahu ka gacmobeelay iyo 100 oo aanu ku darnay sadaqadii loo ururinay gabadh iyada iyo caruureedu ku xanuusanayan magaalada burco.
waxa kale oo na soo gaadhay 230 oo ahaa sakatul fidir oo aan raashin ugu iibinay reerkaas aabahu ka dhawacmay iyo oday iyo islaan ag degan reerkan oon lahayn wax ubad ah. Isku geyn sadaqooyinkii bishii Ramadan na soo gaadhay ayaa dhamayd 2250 doolar. Intii soo bixisay waxaan ilahay uga baryaynaa inuu ugu daro miisaanka xasanaadka. amiin yaa rabi
Tan iyo markii aan bilownay mashaariicada khayriga oo ahayd 2007 sadaqooyinka na soo gaadhay ay kor u dhaafay 35 kun oo doolar.
Hadii aad rabtid inaan sadaqooyinkaaga gaadhsiino dadka danyarta ah nagala soo xidhiidh Samafal@SDWO.COM
Sawiradii maalintii ciida ka horeysay